Thursday October 15, 2020 - 11:51:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaanka ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa xaqiijiyay in Trump uu qorshanayso sidii uu ciidamadiisa ugala bixi lahaa dalka Soomaaliya.
AFRICOM ayaa walaac ka muujisay qorshaha cusub ee Trump uu ku wajahayo dalka Soomaaliya, Col. Chris Karns oo ah Afhayeenka AFRICOM ayaa wareysi uu siiyay wargeys laga leeyahay Mareykanka wuxuu ku sheegay in ay niyad xumo muujinayaan qorshaha ciidamada looga saarayo Soomaaliya.
"Al Shabaab waxay ka dhigantahay halis mustaqbalka ku wajahan Mareykanka" sidaas waxaa yiri Afhayeenka u hadlay taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika.
Xaruntii ay saraakiisha AFRICOM ku lahaayeen magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ayuu Trump amray in ay ka guuraan waxaana la sheegay in xaruntaas laga maamuli jiray howlgallada Mareykanka ee Afrika.
AFRICOM waxay sheegtay in haddii ciidamada American-ka ah ay isaga baxaan Soomaaliya ay awood dheeraad ah heli doonto Al Shabaab islamarkaana ay daciifi doonaan maleeshiyaadka DF-ka "Yaraynta kaalmada caalamiga ah ee la siiyo howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa hubaal ah iyo fursad siinayso argagaxisada oo heli doonto dagaalyahanno cusub iyo hurinta dacaayad waxaana laga yaabaa in ay sii xoogeystaan" ayuu hadalkiisa raaciyay Col. Chris Karns.
Dabayaaqada sanadda 2021 ayaa lafilayaa in intabadan ciidamada shisheeyaha AMISOM ay isaga baxaan dalka Soomaaliya xilligaas oo marxalad kala guur ah uu geli doono dalka Soomaaliya.
Tan iyo markii uu Trump noqday madaxweynaha Mareykanka ayuu duqeymo aan kala sooc laheyn ka geystay dalka Soomaaliya, duqeymahaas oo badanaa lagu xasuuqay shacab rayid ah.
Trump oo si lama filaan ah ugasoo baxay qolka Isbitaalkii lagu daweynayay!
Trump oo saadaaliyay in maalmaha soo socda ay xaaladiisu xumaan doonto.
Carona Virus oo asiibay Trump iyo xaaskiisa.